Moldovan Vertuta - uzommeputa
Vertuta bụ pastry na-ewu ewu na Moldavia mere si bezdozhzhevogo wepụ mgwakota agwa na nri, dịka strudel . Maka njuputa ahụ nwere ike iji ụdị nri dị iche iche (ụtọ na nri dị mma), na-abụkarị brynza ma ọ bụ obere cheese, grated raw pot with herbs or pothed potatoes, egg eggs, pumpkin, minced meat, kabeeji, jam mkpụrụ.
N'ozuzu, nkwadebe nke Moldovan na-agbanye na oven bụ ihe dị mfe, ha dị njikere ngwa ngwa, ma ụfọdụ nkà ka dị mkpa, nke mbụ, maka ịdọta mgwakota agwa ahụ. Ihe dị na mgwakota agwa, nke ka mma.
Akpụkpọ ụkwụ Moldovan na obi chiiz - uzommeputa
ọka wheat - 1.5 iko;
Chicken egg - 1-2 PC.
agbaze butter - 100 g;
mmanụ ọka - 1-2 tsp.
mmiri - iko 2/3;
ọ bụ onye ọhụụ ma ọ bụ nnukwu abụba.
Anwụrụ ntụ ọka na-arụ ọrụ n'ime akpa na-arụ ọrụ, mee ncha ma wụsa nsen na mmanụ mmanụ, mmiri na nnu. I nwekwara ike itinye n'ime ule 2 teaspoons nke mkpụrụ osisi brandy ma ọ bụ vodka iji meziwanye usoro nke ule ma bulie usoro mmiri.
Anyị na-agwakọta mgwakota agwa (ọ nwere ike ịbụ igwekota), ọ ghaghị ịgbapụta na ọ na-agbanwe. Gwakọta mgwakota agwa ahụ, kpuchie ya na akwa akwa akwa akwa damp na-ahapụ maka ọkara otu awa. Anyị na-ekewa mgwakota agwa ahụ n'otu akụkụ, site na nke anyị na-atụgharị achịcha ndị dị nro, na-ejighị ya na ntụ ntụ ntụ ma tinye 2-3 pc.
Kedu ka esi mee mgbanwe Moldovan?
Nri cheese mash na ndụdụ na ntakịrị salted.
Wepuo ihe ọ bụla a kwadebere na nchịkọta nke ọ bụla dịka o kwere mee, ma ka ọ ghara ịdọwa. Anyị na-agbasa nkwụnye ahụ na njedebe ma ghọọ akwa soseji dị ogologo, nke, n'aka nke ya, na-agbapụ gburugburu. Acha na oven preheated maka ihe dị ka 40-45 nkeji. Anyị na-eje ozi na tii, kọfị, mmanya table ma ọ bụ compote.
Moldovan kwadoro ya na kabeeji - ochie usoro nhazi
ntụ ọka ọka - 2 iko + ntakịrị ihe;
mmanụ ọka - 3 tbsp. ngwunye;
nnu - 2 tuo;
okpokoro mmanya - 1-2 tablespoons. ngwunye;
Na-agwakọta ntụ ọka ahụ site na ntụ ọka ahụ a gụrụ mmanụ na mmanụ mmanụ sunflower, nnu mmanya na mmiri. Mesim jiri nlezianya aka ma tie aka na tebụl. Anyị na-akpụ ya na akpụkpọ anụ, kpuchie ya na akwa akwa ma hapụ ya maka minit 40. Gwaa ihe odide E ji nlezianya gbasaa tebụl ahụ, tinyere ákwà linin dị ọcha. Ntughi ihu na-aga n'ihu na tebụl - ebipụ.
Sauerkraut, n'ezie, saa ya na mmiri oyi a na-ekpo ọkụ ma mee ka ihe mkpofu daa. N'okwu a, ị nwere ike iji kabeeji ọhụrụ, na mbipute a, a ga-etinye ya shredded, wrinkled, podsolit ma chere minit 20. I nwekwara ike iji steed na chopped yabasị.
Anyị na-etinye ndochi na nsọtụ nke mkpụrụ ahụ site na mgwakota agwa, gbanwee dị ka mpịakọta, ya, n'aka nke ya, na gburugburu. Na-etinye ya na tebụl ruo minit 40.
Anyị na-eje ozi na Moldovan mmanya.
Risotto na mọ
Cheesecake "New York" - ihe nchịkọta a kpochapụrụ nke eji megharịa ọnụ America
Xe si anụ
Schnitzel - uzommeputa
Eggplants na Armenia - Ezi ntụziaka nke na-atọ ụtọ nri Caucasian
Spaghetti na akwụkwọ nri - uzommeputa
Bar Rafaeli kachasị ize ndụ n'oge ọrụ ya niile
Ụdị FSH na ụmụ nwanyị
Nsogbu na-eme ka nwatakịrị na-agbapụta - gịnị ka ị ga-eme?
Kedu esi esi mmiri yabasị ka nku ghara gbanwee edo edo?
A na-ahụ Kristen Stewart na Stella Maxwell ọnụ mgbe ha nụsịrị akụkọ banyere otu nwoke na-eme ihe nkiri na Robert Pattinson
Beetroot na oven na foil
Akara narị afọ nke 18 na Russia
Uwe ejiji uwe edozi 2017 - ejiji ejiji nke afo ohuru
Ihe ngosi nka dị na Hirax Hill
Kedu ka esi eto ezigbo tomato?
Ihe isi ihe nke oma
Kedu ihe bara uru maka chicory soluble?
Kedu otu esi kụziere otu nkịta ka ọ nwụọ?
Vase si modulu
Esi echekwa churchkhelu?
Nri na yogọt